काबुलबाट विमानको चक्कामा लुकेर भाग्न खोज्ने अफगानी नागरिक आकाशबाटै खसे ! (भिडिओ) - dautarimedia.com
काबुलबाट विमानको चक्कामा लुकेर भाग्न खोज्ने अफगानी नागरिक आकाशबाटै खसे ! (भिडिओ)
अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा पुगेपछि देश छाड्नका लागि मानिसहरु आफ्नो ज्यानै जोखिममा राख्न थालेका छन् ।
सोमबार आकाशमा उडिरहेको विमानबाट खसेर ३ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । सैन्य जहाजको चक्कामा लुकेर यात्रा गर्न खोज्ने तीनजना विमान उडिरहेको बेला खसेको बताइएको छ ।
पछिल्लो केही दिनमा तालिबानले आफ्नो कब्जा बढाएसँगै अफगानिस्तानबाट बाहिरिने र सरकारप्रति आक्रोशित हुनेको संख्या बढेको छ । उनी केही दिनदेखि हामिद कारजाइ विमानस्थलमा छन् ।
‘भीआईपीलाई सबैभन्दा पहिला बाहिर उड्नलाई अनुमति दिइएको छ । उनीहरुले दिएको मोटो रकमको कारण व्यावसायिक उडान र निजी उडानले उनीहरुलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्’ । धेरैजसो मानिस खाडी मुलुकतर्फ उडेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएको अर्को भिडियोमा मानिसहरु विमानमा चढ्नको लागि तँछाडमछाड गरिरहेको देखिन्छ ।
भिडियोमा एक पछि अर्को गर्दै तीन जना क्रमश जमिनमा खसेको देख्न सकिन्छ। स्थानीका अनुसार उड्ने तयारीमा रहेको हवाईजहाजको टायरको बीचमा केही मानिस उभिएका थिए। काबुल विमानस्थलबाट हवाई जहाजले उडान भर्न आकाशतिर अगाडी बढ्दै गर्दा मानिसहरु एक पछि अर्को गर्दै जमिनमा खसे।
अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएसँगै काबुल विमानस्थलमा ठूलो भीड देखिएको छ । हाल विमानस्थल अमेरिकी सैनिकको नियन्त्रणमा रहेको छ । रोयटर्सका अनुसार विमानस्थलमा भएको गोलीबारीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५ पुगेको छ ।
Previous: दुई दिनभित्रमा तपाँईले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस् !!! तपाँइको जीवनमा आमुल परिवर्तन हुने छ !
Next: यौ-न प्या’स बढाउन अरबी राजकुमारहरु गर्छन यस्तो सम्म?